साउदीमा कोरोनाबाट तीन नेपालीको मृत्यु, बहराइनमा संक्रमित नेपालीको संख्या ३३१ पुग्यो « Naya Page
साउदीमा कोरोनाबाट तीन नेपालीको मृत्यु, बहराइनमा संक्रमित नेपालीको संख्या ३३१ पुग्यो
काठमाडौं, ५ जेठ । नेपालका कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान गइसकेका बेला प्रवासमा रहेका नेपाली पनि उतिकै समस्यामा छन् ।
नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुक साउदीको जेद्दा क्षेत्रमा तीन नेपालीको कोरोना भाइरस संक्रमका कारण ज्यान गएको छ ।
साउदी सरकारका अनुसार साउदीको जेद्दा र जजानलगायतका क्षेत्रमा गरी १४८ नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । साउदीको सबै क्षेत्रमा गरी ६७४ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको त्यहाँको स्वास्थ्य र विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएका पनि दूतावासले जनाएको छ ।
त्यस क्षेत्रमा संक्रमितमध्ये ३३ जना निको भएको महावाणिज्यदूतावासका कार्यवहाक महावाणिज्यदूत रेवती पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
यता बहराइनमा थप ८६ नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । योसँगै बहराइनमा कोरोना संक्रमित नेपालीको संख्या ३३१ पुगेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतवासले जनाएको छ । यसअघि बहराइनमा २४५ जना नेपालीमा कोराना संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमित सबैको बहराइन सरकारले नै उपचार गरिरहेको छ ।
बहराइनमा अहिलेसम्म ६ हजार ७४७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा २७ सय ६२ जना निको भएका छन् । तर सङ्क्रमितमध्ये कति नेपाली निको भए भन्ने विवरण भने खुलाइएको छैन । बहराइनमा १२ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ ।
भारतसँगको संवादको स्थिति ट्रयाकमा फर्केको छ : डा. भट्टराई
थप १,४७४ जनामा कोरोना संक्रमण, १,९३१ जना निको, २९ को मृत्यु
काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको संवाद